Otu esi enweta SOL & Nweta ụgwọ ọrụ na Samoyedcoin - Samoyedcoin
Ụlọ akwụkwọ Samo
Otu esi enweta SOL & Nweta ụgwọ ọrụ na Samoyedcoin
Gịnị ma ọ bụrụ na anyị agwa gị na ị nwere ike inye aka chekwa, decentralize, na ịkwado gburugburu ebe obibi Solana mgbe ị na-enweta SOL? Nke ka mma, gịnị ma ọ bụrụ na anyị agwa gị na ọ na-ewe naanị nkeji 5 iji malite?! N'ụzọ dị mma, nke a ga-ekwe omume, na narị puku kwuru puku Solana token na-eme nke ahụ. Usoro a nke inye aka chekwa netwọkụ Solana na ị nweta ụgwọ ọrụ maka ime nke a ka amara dị ka "staking."
Na post a, anyị ga-ejegharị gị site na itinye ego, ihe kpatara o ji dị mkpa, otu esi etinye SOL gị, yana ihe egwu dị n'ịkwụ ụgwọ. Mgbe ị gụchara akwụkwọ a, ị ga-amatakwu gbasara staking, nwee echiche otu esi eme ya, ị ga-enwe ike ikpebi ma staking ọ dabara gị ma ọ bụ na ọ bụghị.
Kedu ihe bụ Staking?
Ịkwụ ụgwọ bụ mgbe ndị SOL token na-ekenye akara ha n'aka onye nkwado. Ndị nkwado dị adị iji hazie azụmahịa na netwọkụ Solana, na-ejigide nnomi azụmahịa niile mere, ma nyere aka chekwa netwọkụ ahụ. Ịnye akara SOL n'aka onye nkwado iji nyere aka chekwa netwọkụ ahụ ka a na-akpọ "nchịkọta."
Mgbe ị na-enyefe SOL gị na onye nkwado, ị na-egosi ogo ntụkwasị obi na onye nkwado na netwọkụ. Ka SOL na-enyefe onye na-akwado nkwado, ka "ihe akaebe" na-egosi na ọ na-agwa netwọk na ha nwere ntụkwasị obi. Nke a na-enye onye nkwado aka ịhazi azụmahịa ndị ọzọ wee nweta ụgwọ ọrụ dị egwu iji soro ndị nnọchi anya ya kerịta. Rịba ama na ị naghị ahapụ ikike nke SOL gị mgbe ị na-etinye aka na onye na-akwado ya; ị na-anọgide na-achịkwa SOL gị niile.
Kedu ihe na-akwụ ụgwọ ụgwọ?
N'oge ederede, ndị na-eme ihe nwere ike nweta pasentị pasentị kwa afọ (APY) nke 6.7% na SOL ha na-etinye na mgbanwe maka nhazi azụmahịa na idobe ọnọdụ netwọkụ. Agbanyeghị, ndị nnochite anya nwere ike ịtụ anya na ha ga-enweta obere mkpụrụ na-adabere na onye nkwado ahọpụtara. Nke a bụ n'ihi na ndị na-akwado ọrụ na-ekere òkè n'ụgwọ ọrụ ego a na-enweta n'aka SOL, ma ọ bụ ihe a maara dị ka "ọrụ nkwado." Ekwesiri iburu n'uche na ụgwọ ọrụ APY nke ndị nnọchi anya na-enweta nwere ike ịgbanwe dabere na kọmịsh nke onye na-akwado ya na usoro mmụba nke Solana.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na nkwado nke ị na-eso na-akwụ ụgwọ APY nke 6% ma ị were 100 SOL, ị nwere ike ịtụ anya irite 6 SOL mgbe ị kwụchara otu afọ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na onye nkwado ahụ gbanwere ụgwọ ọrụ ha ka ọkara n'afọ, ị nwere ike ịtụ anya irite ihe na-erughị 6 SOL.
Gịnị Mere Staking Ji Dị Mkpa?
Staking na-enyere aka chekwaa Solana blockchain ma mee ka netwọk ahụ na-aga n'ihu dịka ebumnobi ya. Ịkwụ ụgwọ bụ otu n'ime ihe kacha emetụta SOL token nwere ike ime iji kwadoo gburugburu ebe obibi. N'ịbụ onye na-emepe emepe na nke a na-ekewaghị ekewa, Solana na-adabere na ezigbo ndị na-eme ihe nkiri (validators) iji gosi na azụmahịa ha na-enweta bụ eziokwu ma mee. N'ihi na netwọk Solana nwere ike ịkwụsị ma ọ bụrụ na onye na-ahụ maka njikwa 33% nke niile staked SOL, ka ndị nnọchiteanya na ndị na-akwado ya, ka ọ na-adịkwu ọnụ maka mmadụ (s) ime ihe ọjọọ. Ịkwụ ụgwọ dabere na usoro nkwenye nkwenye nke Solana's Proof-of-Stake, nke emebere iji hụ na netwọk ahụ ka na-achịkọta ma na-arụ ọrụ nke ọma.
Otu esi enweta Solana gị
Ugbu a anyị ghọtara ihe staking bụ, ụgwọ ọrụ ya, na ihe kpatara o ji dị mkpa, ka anyị leba anya n'otú e si etinye ego. Ugbu a, enwere ụzọ abụọ ị ga-esi nweta SOL gị; Ị nwere ike iji mgbanwe n'etiti (dị ka FTX), osisi na obere akpa (dị ka Phantom ma ọ bụ Solflare), ma ọ bụ jiri ikpo okwu na-egwu mmiri (dị ka DAOPool na Marinade Finance). N'okpuru ebe anyị na-atụle uru na ọghọm nke ọ bụla.
Centralized mgbanwe na-eme ka staking dị mfe; Ihe niile ị chọrọ bụ iji interface ha họrọ n'ime staking.
Ọtụtụ mgbanwe na-enye gị ohere iwepụ akara gị ozugbo.
Ọtụtụ CEX bụ ndị a pụrụ ịdabere na ya na ndị a pụrụ ịtụkwasị obi.
Mgbe ị na-eme njem site na CEX, ịgaghị ahọrọ ihe nkwado. N'ihi na ndị nkwado pere mpe chọkwara SOL ndị a na-enyefe, ịre ahịa site na CEX nwere ike ime ka staking gbadoro anya karịa.
Ụfọdụ mgbanwe na-ana ụgwọ ọrụ kọmitii buru ibu karịa ihe ndị nkwado na-ana.
Mgbe ị na-eji CEX na-ere ahịa, mkpụrụ ego gị ka na-adị mfe ịgbanwe ndị hackers. Ọ bụ ezie na CEX na-aga n'ihu na-akwalite nchekwa ha, a ga-enwekwa ihe ize ndụ nke imebi akaụntụ gị n'ihi mmejọ nke gị ma ọ bụ ntụpọ nchekwa mgbanwe.
Akpa nkeonwe (Phantom, Solflare, Ledger, wdg)
Ị na-achịkwa nke ọma ebe a na-enyefe ego gị.
Ị nwere ike inyefe SOL gị n'ofe ọtụtụ ndị nkwado nwere ụgwọ ọrụ dị elu dị elu.
Ụfọdụ ndị nkwado dị “mma” karịa ndị ọzọ, nke pụtara na ị ga-achọ ikpebi onye ị ga-enyefe.
Enwere ike ịgbanwe ụgwọ ọrụ staking na-enweghị ọkwa ọkwa.
Ọ na-ewe ụbọchị 3 iji wepụ SOL.
Platforms Staking Liquid
Ndị na-ejide SOL token nwere nhọrọ ị ga-eji ikpo okwu na-etinye mmiri mmiri. Nke a na-enye ndị na-ejide akara aka inweta ụgwọ ọrụ dị egwu ma nwee ike 'iwepụ' SOL ha ozugbo. A na-enweta nke a site na ndị na-ere ahịa na-atụgharị SOL ha maka akara SOL sịntetịt nke a ga-agbapụta maka ego SOL hà nhata SOL nke ị tinyere na ụgwọ ọrụ a na-enweta site na staking. Dị ka ọmụmaatụ, DAOPool na Ọnụ ego nke Marinade Finance Ndị ọrụ na-enweta daoSOL na mSOL, otu n'otu, mgbe ha na-etinye SOL ha.
Ị ga-enweta uru niile nke iji obere akpa nke onwe gị rie nri.
Ị nwere ike iwepụ SOL gị ozugbo.
Ụgwọ akwụ ụgwọ a na-enweta site na ikpo okwu staking mmiri mmiri nwere ike ịdị mma karịa ụfọdụ CEX.
A na-atụnye SOL n'ofe ọtụtụ ndị nkwado, si otú a na-ebelata mkpokọta nke tokens na ihe egwu ndị metụtara itinye naanị ole na ole nkwado.
Ị nweghị ike ịhọrọ onye nkwado nke ị na-eso.
Ị na-eche na ihe ize ndụ nke imebi ikpo okwu nke mmiri mmiri.
Ị ga-akwụrịrị ụgwọ iji wepụ SOL gị.
Enwere ihe ize ndụ nke "ịgba ọsọ ụlọ akụ" na-egbochi gị ike iwepụ SOL gị n'oge.
Otu esi ahọrọ onye nkwado
Mgbe ị na-eji obere akpa nkeonwe, ị ga-ahọrọ onye nkwado. Agbanyeghị, n'ihi na ọ bụghị ndị nkwado niile hà nhata, ịkwesịrị ịtụle ọtụtụ ihe mgbe ị na-enyefe onye nkwado. Ihe ndị a gụnyere ihe ndị a:
Ị ga-ahụ ma ọ bụrụ na onye nkwado nwere weebụsaịtị, ndị otu na-arụsi ọrụ ike na ọha, yana ma ha emewo omume ọjọọ na mbụ.
Iji akụrụngwa, dị ka Ndị nkwado.app, ị kwesịrị ị na-atụle otú validator mere n'oge gara aga.
StakeWiz Enwere ike iji hụ ka ndị na-eme ihe na-akwado ibe ha site na "Wiz Score," nke na-edepụta ọtụtụ ihe dị ka nkwụsịtụ data center, oke oke, ịrụ ọrụ ntuli aka, igbochi mmepụta mmepụta, oge, ozi ebipụta, akụkọ ihe mere eme, wdg. .
Nkwụghachi ụgwọ ọrụ
Tụlee ọrụ onye nkwado na-ana na ụdị APY ị nwere ike ịtụ anya inweta. Ụfọdụ ndị nkwado na-ana 100%, ebe ndị ọzọ na-ana 0%.
Enwere ike ịchọta ndepụta zuru oke nke ndị nkwado Solana na ụgwọ ọrụ ha SolanaBeach.io.
Otu esi akụ osisi (Phantom)
Ọ bụrụ na ị kpebie ịwepụ SOL gị na obere akpa nkeonwe, ị nwere ike soro usoro ise dị n'okpuru ebe a ka ịmalite njem staking gị. Site na iji Samoyedcoin na-emekọrịta ihe, ị ga-enyere anyị aka inweta ụgwọ ọrụ dị mkpa iji kpuchie ọnụ ahịa iji rụọ ọrụ nkwado (~ 1 SOL kwa ụbọchị & oghere ihe nkesa) wee tinyeghachi ego na ọrụ Samoyedcoin.
Wụnye Phantom & nkwụnye ego SOL.
Pịa na nguzozi Solana token na obere akpa gị.
Pịa bọtịnụ "Malite ịkpata SOL".
Chọọ maka "Samoyedcoin" wee pịa na nkwado anyị
Họrọ ego SOL nke ịchọrọ itinye.
Pịa bọtịnụ "Stake".
Otu esi enweta nri (DAOPool Liquid Staking)
Mgbe ị na-egwu DAOPool, SOL ọ bụla staked n'ime ọdọ mmiri na-ekesa na ndị nkwado obodo Solana, na ebumnuche nke ime ka netwọkụ ahụ gbasaa ọzọ ma na-akwado DAO niile. Dị ka nke Mee 2022, Samoyedcoin bụ otu n'ime akụkụ itoolu dị iche iche nke DAOPool, nke pụtara òkè nke SOL staked site na DAOPool ga-aga n'ihu na Samoyedcoin validator.
Gaa na DAOPool weebụsaịtị
Tinye nọmba SOL nke ịchọrọ ka etinyere
Ozugbo i tinyegoro na DAOPool, ị ga-enweta akara ngosi daoSOL na nloghachi. Token daoSOL ọ bụla na-anọchite anya òkè gị nke SOL nke etinyere na ọdọ mmiri ahụ, yana ịkwụ ụgwọ ụgwọ ọrụ enwetara. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnata SOL gị na ịkwụghachi ụgwọ ọrụ, ị nwere ike pịa taabụ "Unstake" na webụsaịtị DAOPool wee wepụ SOL gị.
Ihe ize ndụ dị egwu
Dị ka ọ dị na ihe niile dị na crypto, staking abụghị ihe egwu ya. Na ngalaba a, anyị na-akọwapụta ihe egwu ndị ị kwesịrị ịma ma tụlee mgbe ị na-ekpebi ma staking ọ dabara gị ma ọ bụ na ọ bụghị. Ihe egwu ndị a gụnyere ihe egwu netwọkụ, ihe egwu ikpo okwu, ihe egwu nkwado, na njehie mmadụ.
Ihe ize ndụ netwọkụ
Dị ka ọ dị na blockchain ọ bụla, a na-enwekarị ihe ize ndụ na netwọk ahụ na-agbada ma ọ bụ mebie ya. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịhụ onwe gị enweghị ike iwepụ SOL gị ma ọ bụrụ na netwọk ahụ daa. Ọ bụ ezie na ụfọdụ mgbanwe n'etiti etiti na-enye gị ohere ịwepụ n'elu ikpo okwu ha ma ọ bụrụ na netwọk enweghị ike ịhazi azụmahịa n'oge n'oge, itinye ego site na obere akpa nkeonwe pụtara na ị gaghị enwe ike iwepụ SOL gị.
Ihe ize ndụ Platform
Mgbe ọ bụla ị na-echekwa mkpụrụ ego na Centralized Exchange (CEX), ị na-eche na ọ nwere ike imebi akaụntụ gị ma ọ bụ mebie mgbanwe ahụ. N'ihi na achọrọ ka idobe mkpụrụ ego gị na mgbanwe mgbanwe etiti (CEX) iji nweta, ị na-eche otu ihe egwu ndị a mgbe ị na-eji CEX. Ọ bụ ezie na ndị na-enye ọrụ a na-emefu nde mmadụ kwa afọ maka nchekwa ma na-enye ọtụtụ nhọrọ dị iche iche iji chekwaa akaụntụ gị, ihe egwu ndị a ka dị.
Enwere ike ikwu otu ihe ahụ maka iji obere akpa nkeonwe, dị ka Phantom, iji dọba SOL gị. Ọ bụ ezie na Phantom na ndị ọzọ na-ahapụ ndị ọrụ ka ha họrọ onye ha na ha na-akpa, ọ na-enwekarị ihe ize ndụ nke obere akpa nkeonwe inwe ntụpọ nchekwa. Enwere ike ikwu otu ihe ahụ maka ikpo okwu na-akụ mmiri mmiri.
Ihe egwu nkwado
Dịka ekwuru na mbụ, mmadụ kwesịrị ịkpachara anya nke ọma mgbe ị na-ahọpụta onye nkwado. Ọ bụrụ na onye nkwado chọrọ, ha nwere ike gbanwee ụgwọ ọrụ nkwado ha na mberede ma ọ bụ mee omume ọjọọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na onye nkwado na-akpọsa kọmiti 0%, ha nwere ike ịgbanwe ụgwọ ọrụ na ụbọchị ọzọ.
N'ihi na anyị bụ mmadụ, ọ na-enwekarị ihe ize ndụ na ihe na-aga nke ọma n'ihi omume anyị. Ya mere, mgbe a bịara n'ịkwụ ụgwọ, jide n'aka na ị gbasoro nlezianya niile dị mkpa na usoro ziri ezi iji hụ na ị naghị etinye aka na onye na-akwado ihe na-ezighị ezi, zipu mkpụrụ ego ebe ị na-ekwesịghị, na/ma ọ bụ kesaa mkpụrụokwu mkpụrụokwu gị.
N'ịnọgide na-eguzosi ike n'ihe n'ọhụụ anyị nke ịkwalite nkuchi, mmepe na uto nke gburugburu ebe obibi Solana, anyị nwere olile anya na post blọgụ a nyere aka na njem gị iji ghọtakwuo gburugburu Solana. N'olileanya, ị ghọtara ugbu a ihe staking bụ, ụgwọ ọrụ na-akwụ ụgwọ bụ, ihe kpatara itinye ọnụ, otu esi etinye, na ihe egwu dị na ya. Ọ bụ ezie na anyị na-achọ ime ka ndị na-eso ahịa na-eme ka ndị ahịa mara ihe, na-ewere ihe ọmụma a na ijikọta ya na ụfọdụ nyocha nke gị bụ uzommeputa maka ịga nke ọma!
Disclaimer: Ozi a bụ ozi izugbe ma ezubere maka ebumnuche nkuzi naanị. Ebubeghi ozi dị n'ime ya ka ọ bụrụ ndụmọdụ gbasara iwu, ụtụ isi, ndekọ ego ma ọ bụ ndụmọdụ itinye ego. Ozi, echiche na echiche bụ naanị nke onye dere ya na e kwesịghị iji ya mee ihe ndabere nke mkpebi itinye ego ọ bụla. Mgbe ị na-eme mkpebi itinye ego, kpọtụrụ onye ọkachamara itinye ego nwere ikike nke nwere ike hụ na itinye ego gị dabara adaba. Mee nyocha nke gị.
Blọọgụ ndị emetụtara
Kedu ihe bụ Nhọrọ & Wen SAMO Nhọrọ?
Dị ka ọ dị n'ahịa ọ bụla na-erute afọ, crypto ahụla n'oge na-adịbeghị anya mgbawa na ngwaahịa ntinye ego ọhụrụ maka ndị sonyere n'ahịa […]
Maachị 28, 2022
Ị nwere SOL ma chọọ ị nweta ego na-enweghị ego? Mụta ihe staking bụ, otu esi eme ya, yana otu ị ga-esi nweta mkpụrụ na SOL gị maka inye aka n'ichekwa ma mebie Solana blockchain.
Kedu ihe bụ Cap Market? Gịnị Mere O Ji Dị Mkpa?
Maachị 7, 2022
Ọtụtụ mgbe, ndị bịara ọhụrụ crypto na-eleghara ọnụ ahịa ahịa cryptoasset anya karịa ọnụ ahịa. Emehiela ihe ahụ! Mụta ihe bụ isi ahịa ahịa, otu esi agbakọọ ya, yana ihe kpatara o ji dị mkpa na ịnyagharị crypto.
SAMO bụ akụ dijitalụ na-apụta nke na-akwado obodo gbadoro anya na ịbanye ndị ọrụ Solana, ịkụziri ndị na-eso ahịa ahịa, ime njikọ onwe ha, na inyere ibe ha aka ịnya ndụ.
Ọ bụ ezie na anyị bụ ndị kasị ọsọ, kasị rụọ ọrụ nke ọma, na kasị eco-enyi na enyi nkịta mkpụrụ ego na egwuregwu, anyị na-achọsi ike na-karịa naanị na; anyị na-achọ ịbụ onye nnọchi anya Solana.
Ọnụ ụzọ ámá.io
Ọkwa dị ụkọ
English	繁體中文	简体中文	한국어	日本語	Français	Português	Bahasa Indonesia	Nederlands	Deutsch	Español	Dansk	Русский	Italiano	Türkçe	Igbo